တစ်ချိန်က ဖယ်ဒရယ်မူကို တပ်မတော်က မလိုလားသလို ယခု ဒီမိုကရေစီကို မလိုလားမှု ဖြစ်လာသည်။ သေသေချာချာ မေးလျှင်တော့ ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိ။ ကြားပင် မကြားဖူးသော သူများပင် တွေ့ရဖူးသည်။ ထိုသို့ တပ်မတော်အတွင်း၌ စိတ်ဓာတ်အသွင်းခံရခြင်းသည် နို်င်ငံရေး၌ တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူလူထု ထိပ်တိုက် ဖြစ်နေရခြင်း အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။တပ်မတော်သားများကို မေးခွန်းထုတ်လိုသည်? ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ကောင်းစွာ မသိ၊ မခံစားဖူးသော အရာ ကိစ္စတစ်ခုကို စစ်အာဏာရှင်များ ပြောတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ မစူးမစမ်း၊ မဆင်မခြင် မကောင်းမြင်ခြင်း၊ ဖင်ပိတ် ငြင်းဆိုနေခြင်းများသည် သင့်တော်မှု ရှိပါရဲ့ လား။ ပိန္နဲသီး (သို့) ဒူးရင်းသီး ဆိုတာ ဆူးတွေနဲ့ ကွ၊ အထဲမှာလဲ အဆိပ်ရှိမှာ သေချာတယ်။ မစားနဲ့ဆိုလျှင် ကိုယ်တိုင် မစူးစမ်း မလေ့လာပဲ၊ မသိပဲ ဟုတ်မှာပဲ၊ ဒါ မကောင်းတဲ့ အသီးကြီးကွ. မစားကြနဲ့လို့ ပြောနေကြမှာလား။ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့် ကြစေချင်ပါသည်။
သို့သော် ယခု ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုသည့်ကိစ္စသည် နိုင်ငံတော်ကို အန္တရာယ် ကျရောက်မည့် စစ်ရေးစစ်ရာ ကိစ္စလုံးဝ မဟုတ်။ ပြည်သူလူထုနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျယ်ပြန့်အရေးကြီးသည့် နိုင်ငံရေးကိစ္စ၊ ပြည်သူ့အာဏာနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်ရှင် အစစ်သည် ပြည်သူလူထုသာဖြစ်သည်။ သူ့အာဏာသူ ပြန်တောင်းခြင်းသာဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သားများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ တပ်မတော်သားများ၏ တပ်ပြင်ပ မိဘဆွေမျိုး သားချင်း သူငယ်ချင်းများနှင့်လည်းဆိုင်သည့် နိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်၍ ဒီနေရာမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နှင့် စူးစမ်းလေ့လာကာ သတိထား ဆင်ခြင်သင့်သည်။ နိုင်ငံရေးသည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးလှသည်။ စစ်ရေးသည် နိုင်ငံရေးထဲမှ တစိတ်တဒေသသာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသည် စစ်ရေးထဲမှ တစိတ်တဒေသ မဟုတ်ပေ။
ယခု အာဏာရှင်အတွက် ပြည်သူလူထုကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သော စစ်တပ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ထင်ရှားရှား တရုတ်နှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံသာ ရှိသည်။ ရှက်စရာ ကောင်းလှသည်။ မှန်ကန်သော အသိဥာဏ်ရှိလျှင် ထိုယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော လူသတ်မှု၊ ရာဇ၀တ်မှုမျိုးကို ကျူးလွန်ရဲမည် မဟုတ်။ အကယ်စင်စစ် လူသတ်မှုကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်၏၊ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်များအဖြစ် ရောက်ရှိစေ၏။
စစ်တပ်ကို အသုံးချပြီး တိုင်းပြည်အာဏာ (ပြည်သူ့အာဏာ)ကို လုယူချုပ်ကိုင်ထားသော စစ်အာဏာရှင် (ယူနီဖောင်းဝတ်များ) တစ်စုသည် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အကျိုးကိုသာ ပြောတတ်သည်။ အကြောင်းတရားကို ဘယ်တော့မှ မပြော။ အကြောင်းတရားကိုလည်း အသေအချာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းလည်း မရှိ။ မတတ်သာ၍ အကြောင်းတရားကို ပြောရလျှင်လည်း အာဏာရှင်တို့ကို မထိခိုက်အောင် မမှန်မကန်နှင့် အပေါ်ယံသာ လိမ်ညာ ပြောကြသည်။
ထိုစစ်အာဏာရှင်များကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး “တိုင်ပတ်”နေရခြင်း ဖြစ်၏။ အကြောင်းတရားကို မှန်ကန်စွာ လေ့လာဖြေရှင်းလိုက်လျှင် နိုင်ငံရေးမှာ လွယ်ကူစွာ ရှင်းလင်းသွားနိုင်သည်။ အရာရာ ဖြောင့်ဖြူးသွားနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ကာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသွားနိုင်မည်။
စစ်အာဏာရှင်များက စည်းစိမ်အာဏာ ယစ်မူးပြီး မိမိတို့သာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတော်ဆုံး၊ အတတ်ဆုံးဟုဘ၀င်မြင့်ကာ ဘယ်တော့မှ နိုင်ငံရေးကိုပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ချင်ကြသည် မဟုတ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ ကြည့်ပါ။ သေသည်အထိ အာဏာရှင် လုပ်ချင်သည်။ “ငါသေမှ ငါ့နေရာရမည်” ဟုပင် မဆို၊ “ငါ သေရင်တောင် ငါ့နေရာ ငါယူသွားမည်” ဆိုသော လူစားပင်။ နိုင်ငံရေး ပြေလည်၍ ၄င်းတို့ အာဏာ လက်လွတ်ရမှာ စိုးရိမ်သည်။ ပြည်သူ့အာဏာ သက်ရောက်သော ဒီမိုကရေစီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ကျင့်စဉ်) ကို အကြောက်ကြီး ကြောက်ကြသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်၏ အတွင်းသရုပ်ပင် ဖြစ်သည်။